दृष्टिकोण – Page2– Tesro Ankha
मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई कृषिविद् मदन राईको सुझाव
मदन राई १. मुख्यमन्त्री बन्ननुभएकोमा हार्दिक बधाइ । कार्यसफलताको शुभकामना । २. संघीय गणतन्त्र नेपालको ७ प्रदेशमध्ये १ नम्बर प्रदेश साह्रै सन्तुलित भूगोल हो । सबै प्रदेश यस्तो हुनुपथ्र्याे । हुन नसकेकोमा खिन्न लाग्छ । तपार्ईंं भाग्यमानी । यस्तो सन्तुलित र स्रोतले भरिपूर्ण प्रदेशको मुख्य निर्णायक तहमा बस्न पाउनुभएकोमा । ३. तपार्ईंं प्रदेशको माननीय, ठूलो मान्छे होइन । तपार्ईंं जनताको प्र...
सन् १९९१ को अन्त्यतिर पाकिस्तानी राजदूतावासबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्न छात्रवृत्ति पाएँ । त्यसपछि, म लाहोरस्थित पञ्जाव विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाकिस्तान गएँ । म बिहान पढ्थें । दिउँसो त्यहाँबाट प्रकाशित द न्युज इन्टरनेसनलमा काम गर्थें । त्यसअधि मैले नेपाल टेलिभिजनमा एक वर्षजति काम गरेको थिएँ । साप्ताहिक विमर्शमा पनि फाटफुट लेख्ने गर्थें । म पाकिस्तानमा पढ्दै थिएँ । मनमा भने जागिरको पी...
चन्द्रकुमार हतुवाली चिन्डो लहरा जातको एकप्रकारको बिरुवा हो । यसको फर्सीजस्तै लहराको बीच भागमा फल लाग्छ । यो लौका जातसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । बोट त लौकासँग ठ्याक्कै नै मिल्दोे हुन्छ, सहजले छुट्याउन सकिँदैन । चिन्डो वा लौकाको बोट के हो त ? भनेर छुट्याउनका लागि पात वा डाँठ चिमोट्नुपर्छ । यदि चिन्डोको बोट भएमा नमीठो गन्ध आउँछ, जुन गन्ध लौकाको बोट र पातबाट आउँदैन । त्यसरी नै लौकाको तरकारी खान मि...
सुरेश यक्सो मेरो एउटा साथी छ । फेसबुकमा कम देखिन्छ । एकदिन फोटो पोस्ट गर्दै 'कमेन् हरु बरर अाइराछ तर म रिप्लाई दिन्न' भन्यो । 'हँ न किन' भन्दै सोधेँ । 'खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्ताहरूले रिप्लाई नै दिँदैन रछ नि त । त्यै भएर ।' कुरा सुनेर गम् खाएँ । पत्रकार हुनु, लेखक हुनु, साहित्यकार हुनु गाह्रै छैन । गाह्रो चै यो क्षेत्रमा टिकिरहन हो । थुप्रै आशलाग्दाहरू आए-गए । पलायन हुनेक्रम जारि छ । कति अ...
डा. जगमान क्ह्रोँगि लामा गुरूङ तिब्बती भाषाको ल्ह शब्दबाट ल्ह्ये र क्ल्ये हुँदै घले शब्दको संरचना भएको छ । ल्ह शब्दको अर्थ देव हो । अतः घले शब्दले देवको अर्थ बुझाउँछ । तिब्बती भाषाको स–ब्रेन् शब्दबाट साब्रेँ शब्द बनेको छ । स को अर्थ भूमि र ब्रेन्को अर्थ वद्र्धन हो । अतः साब्रेँ घलेको अर्थ भूवद्र्धन घले हो । तिब्बती भाषामा गद्दीलाई ठि भन्छ । ठि लेख्दा ख अक्षरमा र अक्षर जोडेर त्यसमा इकार लगाउ...
लेख्नेले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा
लेखन प्रक्रियाबारे लेखिएका अधिकांश पुस्तकमा लेखनका पाँच चरण हुन्छन् भनिएको छ । ती पाँच चरण भनेको तयारी, मस्यौदा, परिमार्जन, सम्पादन र प्रकाशन हो । उल्लिखित चरणलाई एकपछि अर्काेगरी जस्ताको तस्तै पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन । लेख्नेक्रममा प्रायशः अघिल्लो चरणमा पुगिसकेर फेरि पछिल्लो चरणमा फर्कनुपर्ने हुन सक्छ । अर्थात् लेखकले एक वा धेरैपटक पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ उल्लेख गरिएको लेखन प्रक्...
काठमाडौंमा कसरी बस्ने
विवश वस्ती चपला, अवलाहरू एक सुरमा गुनकेशरीको फूल ली शिरमा हिँड्न्या सखी लिकन वरिपरि अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी काठमाडौं उपत्यकाको महिमागान गाउन चाहनेले आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा सिर्जित यी हरफहरू निश्चय नै गुन्गुनाउने गर्छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरता, जनजीवन र मानवीय सम्बन्धलाई पर्गेल्ने शब्दहरू छन्, आदिकविका यो सुन्दर काव्यभित्र । आदिकविले दशकौंअघि व्याख्या ग...
कुसुम भट्टराई पत्रकार मित्र विष्णु सुवेदीले अन्नपूर्णपोस्ट दैनिक छाडेर नेपालतारा डटकम सुरु गरे । बालकुमार नेपाल, केशव खनाल, गोपाल खनाल, बालकृष्ण बस्नेत, सरोजराज अधिकारीलगायतका जल्दाबल्दा पत्रकार ‘प्रिन्ट मिडिया’ छाडेर अनलाइन मिडियामै रमाएका छन् । नारायण वाग्ले, अमित ढकालहरूले ‘प्रिन्ट मिडिया’ छाडेको धेरै भयो । उनीहरू अचेल सेतोपाटीमा छन् । प्रतीक प्रधानजी पनि बाह«खरी डटकममा भिडेका छन् । भ...
पहिल्याउँदै घल राईहरूले कोरेको गोरेटो
राजकुमार दिक्पाल अक्षर चिन्ने भएपछि अक्षर भएका कागजका केही टुक्रा भेटेपछि पढिहाल्ने बानीले जीवनलाई सही गोरेटोमै डोर्याएछ भन्ठान्छु । सानै उमेरमा मेरा आँखाले गन्ती गरेको अक्षर र मेरो कलिलो मस्तिष्कको आफ्नै बुताले त्यसको भाव बुझ्न प्रयत्न गरेको क्षण सम्झँदा रमाइलै लाग्छ । जे भेटियो त्यही पढियो । मेरो के मान्यता छ भने कागजमा जुन शब्द छापिएर आउँछन्, ती महत्वहीन हुँदैनन् । बरु तिनको महत्वको विशेष...
किन चाहिन्छ मगरलाई मिडिया ?
देव पचभैयामगर समयको परिवर्तनसँगै नेपाली समाज पनि फेरिँदै छ । आधुनिकताको नाममा धर्म, संस्कृति, परम्परागत चालचलन र रीतिरिवाज हराउँदै गएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो अनि आदिवासी जनजातिमध्ये ठूलो जातिमा पर्ने मगर समुदायमा पनि परेको छ । मगरका भाषा, संस्कृति, रहनसहन र संस्कारजन्य क्रियाकलापमा कमी आउँदै छन् । पहिचान बोकेका तिनै भाषा र धर्म, संस्कृति लोप हुँदै जा...